သက်ဝေ: အချစ်တော်လေး နှစ်ကောင် (၄)
ywartharlay-ytu August 15, 2010 at 10:51 PM
ကျနော့မှာ စနိုးဆိုတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင် ရှိခဲ့ဖူးတယ်
ကျနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ခွေးတွေ ကြောင်တွေနဲ့
ပတ်သက်ရင် သည်းသည်းလှုပ်တတ်သူတွေ တပုံကြီးပါ။
ခွေးပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ကဆို သူခွေး depressionကျ
တဲ့ရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး...ဆရာဝန်ပြ ကုလိုက်ရတာ ။ အတော်ဈေးကြီးတယ်..။
:P August 15, 2010 at 10:52 PM
နှာခေါင်းနဲ့ မျက်နှာအတို့ခံရလို့ အေးကနဲဖြစ်သွားရင် အားကနဲ ထအော်မိမယ်.. (အကြင်နာကင်းမဲ့တာမဟုတ်ဘူး.. အသည်းယားတာပါ။ )
ညီမလေး August 15, 2010 at 11:09 PM
ခွေးလေးတွေကိုတော့ ချစ်တယ် မမသက်ဝေ .. ဒါပေမဲ့ မမွေးချင်ဘူး မမသက်ဝေရယ် .. သံယောဇဉ်တွယ်မိရင် ခံစားရလွန်းလို့ပါ ။ သူတို့က သိတတ်သစ္စာရှိတတ်ပြီဆိုရင် တချို့လူသားတွေထက် သာတယ်လေ...
TURN-ON-IDEAS August 15, 2010 at 11:24 PM
"သံယောဇဉ်၊ သံယောဇဉ်၊ လူကို အရူးတပိုင်းဖြစ်စေတဲ့ ဒီသံယော..ဇဉ်၊ ဒီသံယော..ဇဉ်၊ သံယောဇဉ်"
မောင်မျိုး August 16, 2010 at 12:35 AM
ခု လောလောဆယ် နေနေတဲ့ အိမ်မှာ ခွေး ၁၂ ကောင်တောင် ရှိတယ် ချစ်စရာကောင်းမကောင်းတော့မသိ ဟောင်လိုက်တာများတော့ ပြောမနေနဲ့ ညပိုင်း ညည့်နက်ရင် ထမင်းဆင်းမစားရဲတော့ဘူး ခွေးကြောက်လို့တော့မဟုတ် အိမ်က လူလား ဘာလားမသိ စွတ်ဟောင်နေတာနဲ့ တစ်အိမ်လုံးနိုးမှာကြောက်လို့း) အစ်မလိုချင်ရင် တစ်ကောင်ပို့လိုက်မယ်လေ ယူမလားး ။
ZT August 16, 2010 at 2:11 AM
ခွေးပေါက်စနကလေးတွေ ၃ ကောင်မွေးဖူးတယ်။ ပထမဆုံး ချင်းခွေးကလေးကို တစ်အိမ်လုံး ဝိုင်းချစ်ကြတာ။ နောက်တော့ နံလို့ ဆိုပြီး ရေချိုးပေးလိုက်တာ ခွေးက ၆ လ မပြည့်သေးတော့ နမိုးနီးယားနဲ့ ကြွသွားတယ်။ ဒုတိယ ချင်းခွေး ကျတော့လည်း အားအားရှိ ပုဇွန်ခြောက် ပဲ ကျွေးနေတော့ ခွေးက သံထပြီး ဂန့်သွားပြန်တယ်။ တတိယ တကောင်ကျတော့ အင်းခွေး။ ရေမချိုးပေမယ့် မိုးမိပြီး နမိုးနီးယားနဲ့ ကြွသွားပြန်တယ်။
ဟိုတခေါက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်မှာ ခွေးက ၉ ကောင်။ တကောင်မှ ကိုယ့်မသိဘူး။ ကိုက်လည်း ကိုက်တတ်တယ် ဆိုလို့ ခြံထဲတောင် သတိထားပြီး ဆင်းနေရတယ်။
တယ်ရီယာက အစာရွေးတယ် ဆိုတာ ရွေးစရာ ရှိလို့ပါ။ အိမ်နားက တယ်ရီယာ တစ်ကောင်တော့ စားစရာမရှိရင် ကန်းစွန်းရွက်၊ ကြက်ဥကြော်၊ ငှက်ပျောသီး အကုန် စားတာပဲ။ အိမ်က ခွေးတွေ အတွက် ကြွေးထားတဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းနဲ့ ထမင်းတောင် အဲဒီ တယ်ရီယာက ကြုံရင် ဝင်အုပ်သွားသေးတယ်။
mae August 16, 2010 at 3:13 AM
မမသက်ဝေ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်တာ များပြီ။။ သီချင်းတပုဒ်တင်လိုက်.. post တင်လိုက်..
မေလဲ အကောင်လေးတွေ ချစ်တယ်၊ အင်္ဂလန်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းခွေးလေးက ရှိသမျှလာသမျှလူကို မတည့်ပေမယ့် ကိုယ့်ကျ တည့်တယ်၊ သူ့ကို သွားသွားကျောင်းပေးတယ်.. သူက လည်လဲ လည်တယ်.. မဆူမှန်းသိတော့ ပန်းခြံထဲက မထွက်တော့ဘူး၊ ပြီးရင် ချွဲလဲ သိပ်ချွဲ..သူ့ကိုယ်မှာ အနာလေးတွေဖြစ်တော့ လာလာအီတာ၊ သူ့ သခင်တွေဆူလဲ လာလာတိုင်တာ..
ခုတော့ သူနဲ့လဲ ဝေးသွားပြီ :( အရင်လကတွေ့တော့ မျက်စိမှုန်နေပြီ
mae August 16, 2010 at 3:15 AM
ZT comment ကို ဖတ်ပြီး မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ရယ်သွားတယ်
အိမ်မှာလဲ ခွေးတွေ အများကြီးမွေးလို့...ခွေးဆိုချစ်တယ်။
ချစ်တယ်သာပြောတာပါ အိပ်ယာပေါ်တက်အိပ်ရင် မကြိုက်ဘူး။ ကိုင်ပြီးရင် သူတို့ကို ထိပြီးရင် ချက်ချင်း လက်ဆေးပစ်မိတာပဲ။ ရေချိုးပြီးစအချိန်ပဲ လုံးထွေးပြီး ဆော့ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ တကယ်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မချစ်တာလားမသိဘူးနော်။ မသက်ဝေပြောသလိုပဲ ခွေးနံ့ရလို့လား မသိဘူး။ တော်ရုံ ခွေးတွေနဲ့တော့ တည့်လွယ်တယ်။ ခွေးလေးတွေ သေတိုင်း ငိုရလွန်းလို့ အခု နောက်ပိုင်း ထပ် မမွေးဖြစ်တော့ဘူး။ မွေးလဲမမွေးချင်တော့ဘူး။ ဘယ်ခွေးမှ မချစ်ချင်တော့ဘူး။
Vista August 16, 2010 at 11:27 AM
မေဓာဝီ August 16, 2010 at 12:27 PM
အိမ်က ကစ်ကစ်ကတော့ ခုထိသောင်းကျန်းလို့ ကောင်းတုန်းပဲ။
အင်တာနက်ကနေ အိမ်နဲ့စကားပြောရင် သူပါဝင်ဝင်ပြောသေးတာ တ၀ုတ်ဝုတ်နဲ့။ ၀က်ဘ်ကမ်နဲ့ သူ့ကို ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်တော့ ပဲပေးပြီး ငြိမ်နေတယ်။ တခါတခါတော့ သူမျက်နှာ မမြင်အောင် ကျောပေးထားသေးတာ။
အမခွေးလေးအကြောင်း ဖတ်ရတော့ သူ့ကို သတိရလိုက်တာ။ သူကတော့ အတော်ဆိုးတယ်။ ဆိုးပေမဲ့ ချစ်နေရတာပါပဲ။
ခွေးတကောင်ရဲ့ ကရိကထကတော့ ကြီးတယ်အမရေ။ မမွေးတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ အခုဒီမှာ ဦးလေးမိတ်ဆွေအိမ်မှာ ခွေး ၂ ကောင်ရှိတယ်။ တခါတလေ သူတို့ကို သွားကျောင်းပေးတယ်။ ကစ်ကစ်လောက်တော့ ချစ်ဖို့ မကောင်းဘူး။ :P
မိုးငွေ့...... August 16, 2010 at 1:49 PM
မမသက်ဝေပြောတဲ့ အနံ့မျိုးမရှိလို့လားမသိဘူး ညီမတစ်ဝမ်းကွဲအိမ်ကခွေးလေးက ညီမသွားလည်တိုင်းဟောင် ဟောင်နေတတ်တာ မရိုးနိုင်အောင်ပဲ...ခုထိ ....။
pandora August 17, 2010 at 9:01 AM
သူလေး ဆုံးသွားတော့ ဖုန်းပြောနေတာ ကြားလိုက်သလိုပဲ။
ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကောင်လေးတွေကို ကရိကထခံပြီး မွေးဖို့က ဒီနေရာမှာတော့ အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ အချိန်နဲ့နေရာပေါ့။ အရုပ်ကြီးပဲ ကောင်းပါတယ်နော်။
မေဇင် August 17, 2010 at 2:01 PM
1 /2/3/4အစအဆုံး...တစ်ခါထဲ..ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ...။ မမသက်ဝေ အကောင်လေးတွေကို ချစ်စနိုး ဖြစ်သွားလို့ တရိစ္ဆာန် မချစ်တတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ထင်နေတဲ့ အထင်တောင်မှ......မှားသလား တွေးမိသွားတယ်း)
မောင်လေး August 17, 2010 at 10:07 PM
တခြားခွေးတွေထက် အသိညဏ် ပိုရှိပုံပဲ..။
ဇွန်မိုးစက် August 18, 2010 at 11:34 AM
လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကြားမှာ ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မိတဲ့ သံယောဇဉ်က တကယ်ပဲ မသေးဘူးနော်။
သူတို့လေးတွေက သက်တမ်းတိုတော့ ခံစားပြီး ကျန်ခဲ့ရသူတွေက ဇွန်တို့လူသားတွေဖြစ်နေတာ။
T T Sweet August 18, 2010 at 11:15 PM
မမွေးတာကောင်းပါတယ် အန်တီသက်ဝေရေ။ သံယျောဇဉ်တွေ များလွန်းလို့ပါ။ အိမ်က သမီးကလဲ ကြောင်လေးတွေ မွေးချင်နေတာ။ သူ့အဖေကလဲ ခွင့်မပြုဘူး။ ကိုယ့်အနေနဲ့လည်း မမွေးစေချင်တော့ဘူး
Moe Cho Thinn September 3, 2010 at 9:58 AM
(၁) ကနေ (၄) အထိ ဆက်တိုက် ဖတ်သွားပါတယ်။ သူတို့လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ခံစားရလွန်းလို့၊ စိတ်ကလဲ သူတို့နဲ့ဆို နုလွန်း ပျော့လွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ဒေါသ ဖြစ်ရမလိုပဲ။
In our apartment, there isaguy who isaprofessional puppy care taker. If you are going trips or any other reasons, he will take care your puppy. And we call him puppy-boy (kwey-kyaung-thar :p)